Buste: Waa barnaamij faa'iido leh oo lagu ciyaaro dhawaqa daaqada iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, dad badani waxay si joogto ah ula falgalaan kombuyuutarrada, ha ahaato shaqo, madadaalo, ama nasasho keliya. Oo intii ay taasi dhacdo, waxay badanaa u isticmaalaan si isku mid ah dhagayso muusikada ama dhegeyso uun dhawaaqyada asalka fiican hawsha la rabo. Mararka qaar waxay adeegsadaan websaydhada internetka iyo waqtiyada kale ciyaaryahan fudud.
Si kastaba ha noqotee, markay tahay ciyaar fudud oo wacan dhawaaqyada asalka ama luuq ama gabay fudud oo gaar ah, codsigana loo yaqaan Buste waxay u noqon kartaa beddel aad u faa'iido badan tan.
Kahor, si buuxda u gal si aad uga faalooto Buste, waxaa xusid mudan in isla ujeeddadan, dalabka «Dhagaha, ilaa iyo inta aad kuxirantahay khadka tooska ah, maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ciyaarto fiidiyowyada internetka dhawaqyada deegaanka ama muusikada adigoon xayeysiinta kala go 'lahayn.
"Headset waa muusig fudud oo loogu talagalay Mac, Windows, iyo Linux oo leh raadinta YouTube-ka, shaashad guri oo leh liis caan ah noocyo iyo waqtiyo, iyo tan ugu fiican oo dhan, raadiye ku shaqeeya Reddit. Sameecadaha dhagaha ayaa qaata heeso ay wadaagaan in kabadan 80 muusig oo muusig yar ah, iyaga ayaa kalaqaada, oo si toos ah ugu ciyaara Waa hab qabow oo aad u qaas ah oo lagu helo muusig cusub maadaama ay doorteen bini-aadamka kale ee adiga oo kale ah oo aan lagu dooran algorithms." Sameecadaha: Muusigga muusikada oo ka socda YouTube iyo Reddit
1 Buste: App loogu talagalay in lagu ciyaaro dhawaaqyada asalka ah
1.1 Waa maxay Buste?
Buste: App loogu talagalay in lagu ciyaaro dhawaaqyada asalka ah
Waa maxay Buste?
Sidaad sheegtay bogga rasmiga ah ee GitHub, Buste, codsigan yar ee fudud waxaa lagu sharaxay sida soo socota:
"Codsi waxtar leh oo lagu dhageysto dhawaaqyada kala duwan. Dhawaaqyada hagaajin kara fiirsashada isla markaana kordhin kara waxsoosaarka isticmaalaha. Ama inay si fudud ugu oggolaadaan inay ku seexdaan jawi buuq badan."
Hadda, Buste waxay u socotaa nooca "0.4.0" oo ku leh ka mid ah muuqaalada ugu fiican kuwa soo socda:
Nice, fudud oo toos ah interface garaaf ah: Meesha isticmaaleha lagu soo bandhigo uruurin yar oo ah dhawaaqyada deegaanka (Dabeecada, safarka, gudaha, buuqa iyo caadada) oo dib loo soo saari karo iyadoo la adeegsanayo baalasheeda mugga si loo hagaajiyo heerka mugga la doonayo ee dhagaystaha. Iyo wax aad u faa'iido badan ayaa ah inay kuu oggolaaneeyso inaad ku ciyaarto dhowr cod oo lagu daray ama lagu daray isla waqti isku mid ah, si aad u awoodo inaad sameysid iskudhaf shakhsi ahaaneed dhadhanka isticmaale kasta.
Dib-u-soo-celinta aasaasiga ah ee bilowga: Si looga fogaado isdhexgalka interface interface. Oo bilow, adoo ciyaaraya qaabdhismeedka dhawaq ee ugu dambeeyay ee la isticmaalay. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad sii wadato ciyaarista goobahan ka dib markaad xirto arjiga.
Tilmaamo kumbuyuutar oo faa'iido leh: Si aad ugu raaxaysato, u isticmaasho deg deg ah oo toos ah arjiga iyada oo loo marayo kumbuyuutarka.
Habab kala duwan ayaa loo isticmaali karaa soo dejintiisa, rakibideeda iyo isticmaalkeeda. Tusaale ahaan, kaydinta haddii aan a Distro Arch iyo OpenSuse, via Keydadka PPA hadaan mid leenahay Ubuntu Distro ama qaar ka mid ah wax soo saar ama iswaafajinaya, iyada oo loo marayo Flatpak, iyo ugu dambeyntii, soo dejiso oo ka soo aruuri xoqida.
Kiiskeena dhabta ah maanta, waxaan dooran doonaa dariiqa ugu dambeeya, tan iyo, caadadeenii MX Linux respin loo yaqaan Mucjisooyinka, inkasta oo uu aqbalo Keydadka PPA, waa inaan marwalba ku darnaa furaha keydka gacanta, iyo inkasta oo ay aqbasho Flatpak, tani marwalba waxay rakibtaa aasaas culus oo loogu talagalay hawlgalka xirmada.
Sidaa darteed, waxa ugu horreeya waa inaad soo dejiso oo aad ka furto fayl "tar.gz" oo ka mid ah nooca "0.4.0". Kadib nafsaddeena ku dheji galka «~/Descargas/blanket-0.4.0» oo leh a terminal xididka. Oo fuliya amarrada amarrada soo socda:
Haddii dhammaan xirmooyinka safka hore la heli karo oo si guul leh loo rakibay, dalabka waa la furi karaa. Buste wax dhibaato ah kuma laha adiga GNU / Linux Distro. Daraasadeena kiiska, maktabada «libhandy-1-dev» Ma ahayn keydkeena, markaa waan soo dejinnay oo waxaan ku rakibnay faylalka ay ku tiirsan yihiin («gir1.2-handy-1_1.0.0-2_amd64.deb, libhandy-1-0_1.0.0-2_amd64.deb y libhandy-1-dev_1.0.0-2_amd64.deb») ka soo socda isku xirka oo waxaan ku rakibnaa iyaga oo isticmaalaya amarka soo socda:
Taas ka dib, waan fulin karnaa oo keliya Buste ka Liiska Codsiyada, baari oo isticmaal. Sida lagu arkay sawirrada soo socda:
Ugu dambeyntiina, kuwa doonaya inay soo dejiyaan qaar ka mid ah dhawaaqyada bilaashka ah iyo kuwa aan boqornimada lahayn si ay u koraan tirada saamaynta dhawaaqa Buste, waxaad kala soo bixi kartaa qaar ka mid ah kuwan soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Blanket», yar dawaar dhawaaqa app loo maqli karo, iyo kuwa kale faylasha codka badan iyo muusikada qaabab kala duwan oo loogu talagalay dib-u-soo-kicinta asalka ah ee Nidaamyadeena Hawlgalka bilaashka ah iyo kuwa furan; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, guud ahaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Buste: Waa barnaamij faa'iido leh oo lagu ciyaaro dhawaaqyada daarta iyo inbadan
Abaalmarinno Geesinimo leh ama sida loo galo adduunka ee cryptocurrencies adigoon qatar gelin lacagtaada